JLingz အောင်ပွဲခံမှုစတိုင်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ရော်နယ်ဒိုကို သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ လင်ဂတ် – Play Maker Sports Journal
လင်ဂတ်ဟာဂိုးသွင်းယူပြီးခါတိုင်း JLingz စတိုင်ဖြင့်အောင်ပွဲခံမှုပြုလုပ်လေ့ရှိသူဖြစ်ပြီးယခုအခါမန်ယူသို့တကျော့ပြန်ရောက်လာတဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုလည်းသင်ပြပေးလာပါတယ်။
Ballon d’Or ဆုကိုငါးကြိမ်ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာကိုယ်ပိုင်အောင်ပွဲခံမှုပုံစံအဖြစ် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာကစားတုန်းက SIUUU! ကိုဖန်တီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကွင်းပရိသတ်ရှေ့သို့သွားရောက်ကာခုန်ပြီးအောင်ပွဲခံတာဖြစ်ပါတယ်။
အိုးထရက်ဖို့ဒ်သို့ရော်နယ်ဒိုရောက်လာပြီးနောက်ဂျက်စီလင်ဂတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကအန်ဒါရာအားအနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ပြီးနောက် ရော်နယ်ဒိုရဲ့ SIUUU! နှင့် JLingz အောင်ပွဲခံပုံစံတို့ကိုပေါင်းစပ်ကာအောင်ပွဲခံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုလင်ဂတ်ဟာသူငယ်စကတည်းကလေးစားအားကျခံရတဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုသူ့ရဲ့ JLingz အောင်ပွဲခံမှုပုံစံကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရသလဲသင်ပြလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာရော်နယ်ဒိုဟာ ဂျက်စီလင်ဂတ်ရဲ့ JLingz အောင်ပွဲခံမှုပုံစံကိုအတုခိုးပြီးကိုယ်ပိုင်အောင်ပွဲခံမှုပုံစံသစ်ဖန်တီးလာနိုင်ပါတယ်။
JLingz ေအာင္ပြဲခံမႈစတိုင္ကို ဘယ္လိုလုပ္ရသလဲ ေရာ္နယ္ဒိုကို သင္ျပေပးခဲ့တဲ့ လင္ဂတ္
လင္ဂတ္ဟာဂိုးသြင္းယူၿပီးခါတိုင္း JLingz စတိုင္ျဖင့္ေအာင္ပြဲခံမႈျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူျဖစ္ၿပီးယခုအခါမန္ယူသို႔တေက်ာ့ျပန္ေရာက္လာတဲ့ေရာ္နယ္ဒိုကိုလည္းသင္ျပေပးလာပါတယ္။
Ballon d’Or ဆုကိုငါးႀကိမ္ဆြတ္ခူးရရွိထားတဲ့ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုဟာကိုယ္ပိုင္ေအာင္ပြဲခံမႈပုံစံအျဖစ္ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္မွာကစားတုန္းက SIUUU! ကိုဖန္တီးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။အိမ္ကြင္းပရိသတ္ေရွ႕သို႔သြားေရာက္ကာခုန္ၿပီးေအာင္ပြဲခံတာျဖစ္ပါတယ္။
အိုးထရက္ဖို႔ဒ္သို႔ေရာ္နယ္ဒိုေရာက္လာၿပီးေနာက္ဂ်က္စီလင္ဂတ္ဟာၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းကအန္ဒါရာအားအႏိုင္ရတဲ့ပြဲမွာဂိုးသြင္းယူႏိုင္ၿပီးေနာက္ ေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ SIUUU! ႏွင့္ JLingz ေအာင္ပြဲခံပုံစံတို႔ကိုေပါင္းစပ္ကာေအာင္ပြဲခံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ယခုလင္ဂတ္ဟာသူငယ္စကတည္းကေလးစားအားက်ခံရတဲ့ေရာ္နယ္ဒိုကိုသူ႔ရဲ႕ JLingz ေအာင္ပြဲခံမႈပုံစံကိုဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရသလဲသင္ျပလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာေရာ္နယ္ဒိုဟာ ဂ်က္စီလင္ဂတ္ရဲ႕ JLingz ေအာင္ပြဲခံမႈပုံစံကိုအတုခိုးၿပီးကိုယ္ပိုင္ေအာင္ပြဲခံမႈပုံစံသစ္ဖန္တီးလာႏိုင္ပါတယ္။